EX - ABSDF: ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စကားလေးတွေ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. ဟေ့ကောင် ကျော်စိန် ဟိုမှာပုလိပ်လက်ပြတဲ့အတိုင်းမောင်းကွ တော်ကြာ လာဖမ်းနေဦးမယ် ကျော်စိန်။ ။. ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက်လုံးပါနေတာ ဖမ်းစရာလား ဗိုလ်ချုပ်ရယ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။ .ဟေ့ကောင် ငါကငါ ဥပဒေက ဥပဒေကွ ကျော်စိန်။ ။. စက်ရပ်သွားပြီ ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. ဟေ့ကောင် နေဝင်း ဆင်း ။ ဒို့ နှစ် ယောက် ကားတွန်းရအောင် ။။။ ====
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. ကြည် အိမ်ကကိုယ့်ရဲဘော်တွေကို ဈေးခြင်းတောင်းမဆွဲခိုင်းပါနဲ့ သူတို့က နိုင်ငံတော်အတွက်ကွ ဒေါ်ခင်ကြည်။ ။. ကြည် မခိုင်းပါဘူး မောင်ရယ် သူတို့ဟာသူတို့ လုပ်ပေးတာပါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောက်မမြင်ချင်ဘူး ====
ရှမ်း။ ။.ဒီရွှေဒင်္ဂါးတွေကို နင် လိုရာသုံးဖို့ ငါ လာလှူတာ ဝေ့ ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. ထားခဲ့ပါ ရှမ်းကြီးရယ် မနက်ကျတော့ ဖဆပလ ကို ကျုပ်ပို့ပေးမယ် =====
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. လွပ်လပ်ရေးရရင်တော့ ခြံလေးစိုက်ပြီး
စာပဲရေးနေချင်တာဗျာ၊ မင်္ဂလာဒုံက ခြံလေးတော့ ကြိုက်သား၊ ကျပ်ငါးထောင်ဆိုတော့
မတတ်နိုင်ဘူး။။ ခြံမရှိရင်နေ ကလေးတွေကိုတော့ ကျောင်းကောင်းကောင်း ထားချင်တယ်ဗျာ။ အငယ်ဆုံးသမီးလေးကို နားကပ်လေးတစ်ရံ ခမည်းပေးဖို့ နတ်မောက်က အမေ့ဆီ ပိုက်ဆံ လှမ်း မှာထားရတယ် ======
ဗိုလ်နေ၀င်း။ ။ .
မမကြည် အိမ်မှာ ဆန် ဆီ ပြတ် သွားရင် ကျနော့်ကိုပြောနော် လာကန်တော့လို့ လက်ခံရင် မင်းကို အရင် ထောင်ချပစ်မယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်က ကျနော့်ကို ကြိမ်းထားတယ် ခင်ကြည်။ ။. စိတ်ချပါ ကုိုနေ၀င်းရယ်။ အဲလိုတွေ ရှိလို့လား။ ကန်တော့တယ်ဆိုတာ လက်အုပ်ချီပြီး သြကာသ ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလား။။။ =======
နေ၀င်း။ ။. မမကြည် ဗိုလ်ချုပ်ကော ဒေါ်ခင်ကြည်။ ။. အိပ်နေတယ် နေ၀င်း။ ။. လူကြီးတွေစောင့်နေတာကြာပြီ ခေါ်ပေးပါလား ဒေါ်ခင်ကြည်။ ။. ကျမ မနှူိးရဲဘူး =========== ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. မင်းနာမည် ချမ်းမြေ့ ။ ။. ချမ်းမြေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. အသက် ချမ်းမြေ့ ။ ။. ၁၆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. ပညာ ချမ်းမြေ့။ ။. ၉ တန်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ။ ။. ငယ်သေးတယ်ပညာဆက်သင် တပ်ထဲမ၀င်နဲ့ ========== ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. အကိုကြီး
မခင်ကြည်ဆိုတဲ့ သူနာပြုဆရာမကို ကျုပ်ကချစ်တယ်လို့ လက်ထပ်ချင်တယ်လို့ ခု မြန်မြန်သွားပြောဗျာ အချိန်မရှိဘူး ကျုပ်မှာ အလုပ်တွေရှိသေးတယ်။။ ======= ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ။. အေးဗျာ အလုပ်ကရှုပ် ငွေက မရှိပါဘူး ဆိုမှ ကလေးကလည်း မွေးလိုက်တာ တစ်နှစ်တစ်ယောက်ပဲဗျို့ ဟားဟား ==== Nurse . မမကြည် ဂျူတီချိန်းရအောင် ဗိုလ်ချုပ်ကို သမီးကြောက်တယ် ဒေါ်ခင်ကြည်။ ။ . ရပါတယ်ကွယ် ဗိုလ်ချုပ်ကုိ မမကြည် ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
Credit to Wiseikta Joti